Global Voices teny Malagasy » Sary ao amin’ny Instagram mahatalanjona amin’ny fihintsanan-dravina ao Japana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Novambra 2015 9:22 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Mediam-bahoaka, Tsidika, Vaovao Tsara, Zavakanto & Kolontsaina
Indreto ny tsonga-tsary avy any Nikko , toerana iray malaza ho an'ny mpizahatany ao amin'ny tangorombohitra avaratra atsinanan'i Tokyo. Malaza amin'ny loko mahafinaritra amin'ny fotoanan'ny mihintsan-dravina i Nikko, indrindra ireo hazo erabla Japoney menamena (Acer palmatum).
Ny toera-panintonana voalohany ao Nikko dia ireo fitambarana tempoly sy toerana masina voahaingo marevaka  namboarina ho môzôle [fasan'ny maherifo] ho an'ireo shogun Tokugawa [jeneraly mpitondra] izay nampiray an'i Japana taorian'ny ady an-trano naharitra fotoana ela dia ela.
Ity lahatsoratra ity dia nivoaka avy amin'ny fitaovana fanarahamaso sy fitadiavana ao amin'ny media sosialy Echosec .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/11/11/76519/
 tempoly sy toerana masina voahaingo marevaka: http://whc.unesco.org/en/list/913